Uhlalutyo lwemihla ngemihla lobuGcisa-i-EUR / i-USD, i-GBP / i-USD, i-USD / i-JPY namhlanje Uhlalutyo lwe-Forex
YeEUR / USD IGBP / USD USD / JPY
UKUKHENZISWA KWEENKCUKACHA: Umxholo wale ngcaciso kukunxibelelwano lokuthengisa, kwaye akukho uphando oluzimeleyo lophalo-mali. Ngaloo ndlela, iimfuno zomthetho kunye nokulawula ngokubhekiselele kuphando lotyalo-mali oluzimeleyo alusebenzi kulo mbandela kwaye aluxhomekeke kuyo nayiphi na into enqatshelwe ukuqhubela phambili ekusasazweni kwayo.
Izinto eziphathekayo zenzelwe iinjongo zolwazi jikelele (nokuba okanye akunjalo nayiphi na imibono). Ayinakucinga ngeemeko zakho okanye iinjongo zakho. Akukho nto kule ndawo (okanye kufuneka ukuba ithathelwe ingqalelo ukuba yiyo) yomthetho, yemali, utsalo-mali okanye enye ingcebiso ekufuneka ixhomekeke kuyo. Akukho ngcamango enikeziweyo kwizinto ezibalulekileyo zenza isincomo ngu-FXCC okanye umbhali ukuba nayiphi na imali-mali, ukhuseleko, ukuthengiselana okanye isicwangciso-mali-mali ukulungele nawuphi na umntu othile.
Nangona ulwazi olubekwe kulo myalezo wolwazi lufumaneka kwimithombo ekholelwa ukuba iyathembeka, iFXCC ayinaso isiqiniseko malunga nokuchaneka okanye ukugqiba kwayo. Yonke inkcazelo ibonisa kwaye ingatshintshwa ngaphandle kwesaziso kwaye ingahle ingabikho ngexesha nanini na ixesha. Akukho FXCC, okanye umlobi walo mbandela uya kuba noxanduva lokulahlekelwa yinto nayiphi na ilahleko onokuyenza, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, evela kuyo nayiphi na imali-mali esekelwe kuyo nayiphi na ingcaciso equlethwe apha.
Le ngcaciso ingabandakanya amashadi abonakalisa ukusebenza kwexesha elidlulileyo kunye noqikelelo kunye nezibikezelo. Nawuphi na ulwazi olunxulumene nokusebenza kwangaphambili kotyalo-mali aluqinisekisile ukusebenza kwangomso.
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, amanani asetshenziswe kule mizekelo ngamaxabiso ka-FXCC, kwaye awanalo abo bantu besithathu.